ညီလင်းသစ်: တောင်ခြေရွာကလေးသို့ (၃)
Posted by ညီလင်းသစ် au 24.5.11
I watched and listened the video twice.I feel the breeze and fragrance of pine,wild flowers and grass of hillside.I'm just pre school student in photography and no comment on that point of view:P
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်၊ အမောပြေစေတဲ့ အခုလို ကွန်မန့်လေးအတွက်....။း)
ရတော့ အရင်ကထက်ပိုလို့တောင် အဲ့ရွာလေးကို သွားလည်
တော့ ကျွန်တော်လည်း နားမလည်လို့ပြောတတ်ဘူးဗျ။
I watch again and again:)
ဓာတ်ပုံလေးတွေရော၊ ထည့်ထားတဲ့ သီချင်းရော ကောင်းတယ် ကိုညီလင်း။ လာကြည့်သွားတယ်နော်း)ကိုညီလင်း အမျိုးသမီးနဲ့ သားသားကိုလည်း နှုတ်ဆက်ကြောင်း ပြောပြပေးပါး)
I also watched and listened your video clip it´s made me feel to remember my childhoods and very match with song and movie as well.
By the way, I haveaprofessional camera that my pa pa gave me when it was my birthday but I only know just press the button when I take photos. In fact I would like to go the photos creation course unless I have enough times.
Can you share mealittle bit of technology if it´s possible?
I don´t have burmese font anymore because the virus was damaged so if I have any mistake by my writting english please forgive me.
အိမ်ကို လွမ်းလိုက်တာ :( ကျမကအဲ့ဒီလို အေးဆေး
စိတ်ငြိမ်တဲ့ နေရာလေးတွေ သဘောကျတယ်
သူများသားသမီးများ စွယ်စုံပဲနော် တော်ချက်
ကိုယ်နဲ့တော့ ကွာပ :)
နည်းပညာတွေကို နားလည်စရာ မလိုပါဘူးဗျာ၊ ခံစား တတ်တဲ့ နှလုံးသား တစုံနဲ့ ကြည့်သွားတာကိုပဲ ကျနော်က ကျေးဇူးတင်နေတာ...၊း)
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူး၊ ပြောလိုက်ပါပြီဗျာ...၊
တူရာ အရောင်ဖွဲ့စည်းပုံတွေ တွေ့တတ်တာ ချီးကျူးစရာ ပါပဲဗျာ၊ အနုစိတ် ကြည့်သွားလို့ ကျေးဇူးပါနော်...၊း)
First of all, don't worry about your English! I got you everything. :) When I bought my first DSLR camera, I, myself, didn't know much about photography (which I still don't). But, we are lucky to live in Internet era and you can learnalot of things you want. Besides, with digital cameras, we have advantages to do errors, know instantly and correct. I am happy to share what I know and let me know when you come across some technical questions. Btw, thanks for visiting my blog and for your comment!
အဲဒီလို မနှိမ့်ချကြေးလေ..၊း) ဦးကြီးပုက အလေးပြု လောက်တဲ့ မဘေဘီရဲ့ ဟင်းချက် ကျွမ်းကျင်မှုမျိုးကို ကျနော်က အားကျနေတာဗျ...။းD
ဗီဒီယိုထဲပါတဲ့ ရေတံခွန်နား သွားထိုင်ချင်တာရယ် ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးနဲ့နေချင်တာရယ် အမ်တီဗီကြည့်ပြီး စိတ်ထဲပိုပြင်းပျသွားတယ် ကြည်နူးစရာလေးတွေကြည့်ရလို့ ကျေးဇူးပါညီလင်း ....
မမောဘူး တောက်လျှောက် ခရီးနှင်မယ်။
( အသံမကြည် ရုပ်မပီရင် ကော်မန့် သို့မဟုတ် စီပုံးမှာ တစ်လုံးနှစ်လုံးရေးခဲ့နော် )
ညီလင်းသစ် ။ ။
အကိုရေ တင်ဆက်တဲ့သူ တော်လို့ ထင်ပါရဲ့ အသက်ဝင်လိုက်တာနော်... အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ ကြည်နူးသလိုလို လွမ်းသလိုလိုနဲ့ အနုပညာ ဖန်တီးချက် ကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ...အားပေးခံစားလျှက်.. ညီမလေး။
အကျီင်္အနီနဲ့ ၀က်ဝံပေါက်လေး စက်ဘီးစီးနေရင်း ပါပါးလို့ခေါ်လိုက်တာ ကြားတယ်း)
တော်ပေါ်ကနေ အောက်ကရွာကလေးကိုရိုက်ထားပေးတဲ့ မြင်ကွင်းကိုကြိုက်တယ် ။
လှလိုက်တဲ့ ရှုခင်းတွေ တကယ်ကို ရင်သပ်ရှုမောပါဘဲ
ထင်းရူးပင်တွေ ရေခဲဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းတွေ မြက်ခင်းစိမ်းတွေ ပန်းဝါ၀ါတွေ စိမ်းနေတဲ့ ရေကန်တွေအားလုံးသဘောကျတယ်။ ကလေးလေးကလည်း ချစ်စရာ..
ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုညီလင်းသစ်ရေ..
ပြီးခဲ့တဲ့ ပို့စ်မှာပါတဲ့ အင်္ကျီအနီရောင်နဲ့ အိန္ဒိယ အမျိုးသားကတော့ ရေတံခွန်နား အထိုင်ကောင်းလို့ ဖိနပ်တဖက် ကျွတ်ကျသွားတာ အသည်းအသန် လိုက်ဆယ် လိုက်ရတယ်၊ မဟုတ်ရင် ဂန္ဒီလို နောက်တဖက်ပါ လွှင့်ပစ်ပြီး ပြန်မလားမသိ...၊း)
Wow... speechless...!!! တကယ်ကို ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး၊း) နှလုံးသားကို ထုတ်ချင်းခပ် သွားလို့..၊ အဲဒီလိုလည်း ကဗျာတွေ ရေးတတ်တာ မသိဘူးဗျ၊ ကဗျာလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်၊ တကယ့်ကိုပဲ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ...၊
ကျနော် လုပ်တတ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ညီမရေ..၊ ရှုခင်းတွေ ကိုက ကောင်းတော့ ဘယ်သူရိုက်ရိုက် အဆင်ပြေမှာပါ၊ ကောင်းသောနေ့လေး ဖြစ်ပါစေ ညီမရေ (ဒီတခါ ကွန်မန့်မှာ မရေးခဲ့လို့ ကျနော်က တလှည့် ပြန်ပြီး နှုတ်ဆက်တာ..)းD
ညီကတော့ တယ်လီပသီတွေ ရနေပြီ ထင်တယ်၊း)
အစိမ်းရောင် မြင်ကွင်းတွေ ဆိုတော့ အစိမ်းရောင် လွင်ပြင်က အမျိုးသမီးလေးတော့ သဘောကျမှာပဲ ထင်ပါရဲ့လို့ ကျနော်ကလည်း မျှော်လင့်မိပါတယ်၊း) ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်....။
nice presentation... thanks...
ဗီဒီယိုလေးကောင်းတယ်အကို၊ 50mm နဲ့ရိုက်တဲ့ Video တွေတော့ ကြည့်ဖူးတယ်။ DSLR Optical Viewfinder က အကိုတို့ လိုသူအတွက်ရောင်းတာနေလိမ့်မယ်။ check ကြည့်ပါလား။ 5DMkII အတွက်သေချာပေါက်ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဟား...ဟား...ဟား... ဖိနပ်ချွတ်ပြီးထိုင်မှာပေါ့ ဘာခက်လို့း)
ကြည့်ရတာ စိတ်ကို ကြည်နူးအေးချမ်းစေတဲ့ Video Clip လေးပါ။ သီချင်းနဲ့လဲ တကယ်ပဲ လိုက်ဖက်ပါတယ်... လွမ်းစရာလေးလိုပဲ ခံစားရတယ်...
Billy Joel သီချင်းတွေထဲမှာ အဲဒီသီချင်းရယ် Honesty ရယ် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ...
Vielen Dank ...!!
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကျနော်လည်း စဉ်းစားသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံး 200 USD နဲ့အထက် ဆိုတော့ လည်း.. ...း) ၊ ဒါပေမယ့် တလျှောက်လုံး ဗီဒီယို ရိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ တန်ပါတယ်..၊
မမီးငယ်ပြောမှ ရွာမှာ ဖိနပ်ဖင်ခုထိုင်ပြီး ၃ ကားပေါင်း မိုးလင်း ကြည့်တာတွေ သွား, သတိရမိတယ်..ဟားဟား၊
ကျနော်လည်း Billy Joel ရဲ့ Honesty ကို ကြိုက်တယ်၊ ဒီသီချင်းကို သူနဲ့ Elton John နဲ့ တွဲဆိုထားတာလည်း တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျ ...။
မြန်မာပြည်မှာလည်း အဲလိုရှိစေခြင်လိုက်တာ။ အရမ်းလှပြီ အရမ်းအေးချမ်းပုံပဲ။
တခါတခါတော့ အဲလိုနေရာမျိုးကို အလည်းသွားနေခြင်သား။
ခုမှ လာကြည့်ဖြစ်တယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ....နည်းပညာတွေအကြောင်း နားမလည်ပေမဲ့ ဒါဟာ အပျော်တမ်းလက်ထက် အပုံကြီးသာနေတဲ့ ပရိုလက်ရာဆိုတာ သတိထားမိတယ်။ လေတဖျတ်ဖျတ်တိုက်နေတဲ့ မြက်ရိုင်းပင်တွေကြားက ဂန္ဓမာလို ပန်းဝါဝါလေးတွေ၊ ရေတဖွားဖွားကျနေတဲ့ ရေတံခွန်၊ တောင်တန်းမားမားကြီးတွေ....။ အရမ်းလှတယ်....။
နေမကောင်းဖြစ်နေတာနဲ့မရောက်ဖြစ်ဘူး။တောင်တန်းတွေရယ် သားသားရယ် လေအတိုက်မှာလှုပ်နေတဲ့ အပင်လေးတွေရယ် အရမ်းသဘောကျမိတယ်။
I watched and listened the video twice.Thankyou for your nice presentation.Say hi to your wife and son,thanks.I will be come again to your block on my holidays.
စော (အဝါရောင်မြေ) ...
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ ကျနော်တို့ ဆီမှာလည်း လှတဲ့ ရှုခင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ အခြေခံ လူမှုအဆောက်အအုံက သေချာ မဖွံ့ဖြိုးသေး လို့သာ...၊ လာလည်တာ ကျေးဇူး ပါနော်...၊
မုန့်ကျွေးချင်စရာ ကောင်းအောင်ကို ကွန်မန့်ပေးတတ် တယ်..ဟားဟား၊ အဲဒီလောက်ကြီးလည်း မမြှောက်နဲ့ လေ၊ ကျနော့်မှာ ပြန်ကြည့်တိုင်း အမှားတွေ မြင်,မြင်နေ လို့ ခက်နေတာဗျ...၊း)
ခရီးတွေထွက်ပြီး အလုပ်များနေတယ် ထင်တာ..၊ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ၊ ဒီကြားထဲ လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်..၊
Thank you for your kind words! Sure..I'll say HI to them on your behalf. Please do come whenever it's ok for you.
Very nice video clip, I can imagine how much time u spent for editing it.
Thank for sharing, Your country is very beautiful. Wish I can visit one day.
Ko Tun Tun ...
Thank you so much for your kind comment. Indeed, it took me some times to edit that video as there were still many new features to master. Hope, next one will beabit faster. :D
It makes me feel soothing!
ကြည်နူးစရာကောင်းလိုက်အောင် ငြိမ်းချမ်းလိုက်တာ.. ကျေးဇူး။
ဘယ် Video editing software လေးတွေများ
ဒီဗီဒီယို အတွက် ကျနော် Adobe After Effects CS3 နဲ့ Adobe Premiere Element9ကို သုံးပါတယ်၊ လာပြီး အားပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ...။
goodbye yellow brick road လိုက်ဖက်ပါတယ်...